Magic Tiles36.72.041 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.72.041 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးစန္ဒရားဂိမ်းထဲကတစ်ခုအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား Get - သင်တို့အဘို့သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်
မှော်ကွက်များ3™ကမ္ဘာတဝှမ်းသန်း 100 ကျော်ကစားသမားတွေရှိပါတယ်ရာ 2019 ခုနှစ်တွင်အခမဲ့ဂိမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏တို့တွင်အများဆုံးခစျြ၏စန္ဒရားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
- အယ်လ်ဘမ်သစ်: လုံးဝအသစ်သောဆောင်ပုဒ်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်သီချင်းတွေကိုအတွက်ဆိုးကျိုးများ။
- စတင်အထုပ်: ဒင်္ဂါးပြားရရန်အခွင့်အလမ်း + စိန် + 75% ကိုပယ်နှင့်အတူကြော်ငြာဖယ်ရှားပါ။ ရုံကလာနဲ့ဖမ်းပြီး, တှနျ့ဆုတျမနေပါနဲ့!
နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စန္ဒရားဂိမ်းလည်း၎င်း၏အပတ်စဉ်သီချင်းတွေကိုဇယားများတွင်အပတ်တိုင်းအားလုံးအသစ်နှင့်လူကြိုက်များကြီးမြတ်သီချင်းတွေကိုစုဆောင်း။ အုပ်ကြွပ်၏မြန်နှုန်းအလုံအလောက်မြင့်မားသည်လာသောအခါထို့အပွငျ, သငျသညျအထဲမှာဝှက်ထားသောလက်ဆောင်များနှင့်အတူအီစတာကြက်ဥစုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်။
ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤကဲ့သို့သောဂစ်တာ, စည်များနှင့်အထူးသဖြင့်စန္ဒရားအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားတူရိယာပေါင်းစပ်ပြီးစန္ဒရားဂိမ်းအမျိုးမျိုးအမျိုးအစားများနှင့်အတူအထူးဗားရှင်းပါ! မှော်ကွက်များ3™အသုံးပြုသူအရည်အသွေးမြင့်စန္ဒရားသီချင်းတွေကိုနဲ့လှပတဲ့ဂိမ်းထောက်ပံ့ထားတဲ့ Google က featured လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းအသစ်များ 2019 တဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
သင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ဂိမ်းကစားရဲ့အုပ်ကြွပ်ကိုအသာပုတ်ပါစို့ - ကိုအကောင်းဆုံးသစ်ကိုအခမဲ့ဂိမ်းတစ်ခုမှာ!
- သင်သည်ထိုသို့သောဂစ်တာ, စန္ဒရား, နှင့်အခြားသူများအဖြစ်ပိုပြီးတူရိယာနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်မည့်တီးဝိုင်း mode ကို။
- တိုက်ပွဲ mode ကို™အွန်လိုင်းထိုကဲ့သို့သောထူးခြားတဲ့စန်ဒရားဖြစ်လာမှော်ကွက်များ3ဦးဆောင်သောကမ္ဘာတဝှမ်းအခြားသူများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကစားသမားများအတွက်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးလျက်ရှိသည်။
- အထူးသဖြင့်စစ်တိုက်ခြင်းမုဒ်၏အဆင့်မြင့် feature ကို - ထုံးစံပွဲ - သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မည်သူမဆိုသင်လုပ်ချင်တယ်နှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ပါစေသော။
- အမြင့်အရည်အသွေးစန္ဒရားသီချင်းများနှင့်မကြာခဏ updated ထားတဲ့အချို့လူကြိုက်များပေါ့ပ်ဂီတ
- ကမ္ဘာ၏ထိပ်ပေါ်မှာအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏စေးထွက်ရှိမြန်နှုန်းတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသူများကဦးဆောင်သောစိန်ခေါ်မှု mode ကို။
သင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကို log in နဲ့မျိုးစုံကိရိယာများပေါ်တွင်ဒေတာကိုမျှဝေပါ။
ခွင့်ပြုချက်: သင်ကဒီဂိမ်းကို download လုပ်သည့်အခါ optimized အတွေ့အကြုံကိုပေးရန်အလို့ငှာ, ကြှနျုပျတို့သညျ "သိုလှောင်" ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံမယ်လို့
ယခုအမှန်တကယ် pianist ဖြစ်လာ! ထိုအညာဘက်ကိုယခုအသစ်ကစန္ဒရားဂိမ်း 2019 နှင့်အတူလမ်းကြောင်းသစ်ဖွင့်အမီလိုက်!
သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများရှိခြင်းပါသလား? support@amanotes.com အီးမေးလ်ပို့ပါသို့မဟုတ်ချိန်ညှိချက်များ> မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများနှင့်ထောက်ပံ့သွားသဖြင့်ဒီဂိမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Magic Tiles3အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Magic Tiles3အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
amirutoy စတိုး 143 557.65k
APK ဗားရွင္း 6.72.041